मुलुक विदेशीको सहयोगको भरमा बन्दैन - भिम उपाध्याय – नयाँ प्रहर
मुलुक विदेशीको सहयोगको भरमा बन्दैन – भिम उपाध्याय
कुनै पनि मुलुक विदेशीको सहयोगको भरमा बन्दैन न कहीं बनेको ईतिहास छ ।
मुलुक जनताको ऐक्यवद्धता, परिश्रम, लगन, राष्ट्रप्रेम, आन्तरिक श्रोतको अत्यधिक परिचालन; विदेशी श्रोतको विवेकपूर्ण सचेष्ठ उपयोग, विश्व व्यापारमा दख्खल; रक्षा तथा अर्थतन्त्रको शक्ति र विकासको मेरूदण्ड विज्ञान र प्रविधिमा गंभीर ध्यान र निरन्तर दिगो लगानी; बिद्वान विज्ञहरूलाई निरन्तर स्वतन्त्र योगदान गर्न ईन्गेज गराईरहन सक्ने सरकारको ल्याकत, क्षमता; विज्ञ प्राविधिक अनुसंधानात्मक संस्थाहरूको निर्माण र सम्बर्धन, उच्च प्रविधिको अधिकतम् उपयोग, प्राविधिज्ञ/ईन्जिनियरहरूका निम्ति चुनौतिपूर्ण अर्थपूर्ण अवसर; मुलुकको सपना निर्माण र ती सपना पूरागर्न वलिदानयुक्त लागिपर्ने प्रतिभावान , जोखिम लिनसक्ने युवावर्गलाई उत्प्रेरितगर्ने योजना निर्माणबाट मात्र बन्न संभव र सुरू हुन्छ !
के हाम्रा अहिलेका राजनीतिक, ब्युरोक्रेटिक, व्यावसायिक उद्योगी, एकेडेमिया जस्ता विभिन्न क्षेत्रका कथित नेताहरूमा राष्ट्र निर्माण के हो र कसरी यसलाई मूर्त रूप दिने भन्ने क्षमता र सपना देखिएको पाईन्छ त?
नेताहरूको विदेश भ्रमण नियमित कार्य हो । भारतमा महिनाका सरदर २ जना विदेशी राष्ट्र वा सरकार प्रमुख वा उच्च सरकारी प्रतिनिधिमंडलको भ्रमण हुनेगर्छ र मोदीलाई पनि विदेश भ्रमण गर्ने टूरिष्ट प्रधानमन्त्री पनि भन्ने गरिन्छ । विदेश भ्रमणले मुलुक बनिहाल्छ भनेर अनावश्यक हौसिनु वा उत्ताउलो हुनु हुदैन/पर्दैन ।
मुलुक आफैले हो, आफ्नो क्षमताले हो बन्ने। तर छिमेकीको सद्भाव, सकारात्मक रवैया तथा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता मुलुकको सम्मान र ईज्जत गर्न छिमेकीलाई र आफूलाई प्रेरित भने गरिरहनुपर्छ । कचकचे छिमेकी भयो भने जति पनि भौतिक विकास भए पनि मनमा आनन्द र संतोष हुदैन। जसको छिमेकी असल छ, उसको जिवन रमाईलो हुने गर्छ । आफू असल बन्ने र छिमेकीलाई पनि असल बन्न तिर उत्प्रेरित गर्न सक्ने नेताको खासमा यहॉ खॉचो हो।
← आफ्नो काम-कुरा, व्यक्तित्वलाई प्रभावकारी बनाऔँ। ५ प्रयोग गरी हेरौँ !
जीवन सहज छ, जीवन-शैली मिलाए पुग्छ →